विवाहको ४ महिनामै प्रियंका र निकको डिभोर्स !::आर एम खबर
विवाहको ४ महिनामै प्रियंका र निकको डिभोर्स !
बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र हलिउड गायक निक जोनको डिभोर्सको खबर बाहिरिएको छ । प्रियंकाले अमेरिकाको पत्रिका ‘द कट ने मोडर्न स्केम आर्टिस्ट’मा निक भन्दा १० वर्ष जेठी हुदाँ बैवाहिक जीवनमा निकै समस्या आइरहेको बताएकी थिइन् । प्रियंका ३६ वर्ष पुगिन् भने निक २६ वर्ष पुगेका छन् ।
उनले उक्त पत्रिकासँगको कुराकानीमा निकले निकै आलोचना झेल्नु परेको बताएकी थिइन् । धेरै व्यक्तिहरुले उनीहरुको विवाह टिक्दैन समेत भनेका थिए । यसै बीच अमेरिकाको पत्रिका ओकेले प्रियंका र निकको डिभोर्स हुन लागेको दाबी गरेको छ । उनीहरुको विवाह भएको ४ महिना मात्रै भएको छ । पत्रिकामा उल्लेख भएअनुसार, उनीहरु काम देखि लिएर हरेक चिजको लागि झगडा गर्छन् ।
उक्त पत्रिकाले निकको परिवारले प्रियंकासँग डिभोर्स गर्नको लागि भिख मागेको समेत दाबी गरेको छ । निकको परिवारले प्रियंकालाई एक परिपक्क महिला हुन् र बच्चाको लागि तयार होलिन् भन्ने सोचेको थिए । तर प्रियंकालाई विपरित पाएपछि डिभोर्सको माग गरेका खुलाएको छ । निक भने अझै दोधारमा रहेको पत्रिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
यस खबर बाहिरिएपछि प्रियंकाको पीआर अफिसले यो खबर झुटो रहेको सावित गरेको छ । उनीहरुले डिभोर्सको सोचे समेत नबनाएको पीआर अफिसले दाबी गरेको छ । यतिबेला प्रियंका परिवारसँग ‘जोनस ब्रदर’ शोको मज्जा लिइरहेकी छिन् । प्रियंकाले शोमा सामेल भएको फोटो पनि सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेकी छन् ।